Fanararaotana ny 9 mey Andron'i Eoropa | Hevitra MPANOHARIANA |
Fanararaotana ny 9 mey Andron'i Eoropa
2012-05-08 @ 09:10 in Ankapobeny
Araka ny re teny ho eny, tsy ho eny Ivandry no hanatontosana ny andron'i Eoropa amin'ity indray mitoraka ity fa eny amin'ny Lapan'ny Tanànan'Antananarivo Analakely. Nandre ihany koa fa asaina ny ao amin'ny fitondrana tetezamita amin'ity fotoana ity, ary mety ho tonga hatramin'ny fandraisam-pitenenan'i Andry Rajoelina aza izany, nefa aleo mody apetraka amin'ny honohono daholo aloha. Raha tontosa moa izany, karazany efa fametrahana tsikelikely ny fankatoavana avy any Eoropa io toe-javatra iray io. Asa hanao ahoana ny ho fizotrany amin'io andron'ny 9 mey 2012 io? Ho fotoam-pireharehana eo amin'ny fitondrana misy ankehitriny ve? Hanao ahoana ny ho mety ho fihetsiky ny mpanohitra amin'izay fotoana izay?
Raha somary nijery antontan-kevitra momba azy ity aho no nahita fa diso ny fahalalako momba ity andron'i Eoropa 9 mey ity. Diso satria nafangaroko hatrany any amin'ny fandresen'ireo mpiara-dia tamin'ny Ady Lehibe Faharoa noho ny andro mifanesy rahateo, ny andron'ny 8 mey no fotoam-pankalazana ny fandresena nanoloana an'i Alemaina Nazi ho an'ny tontolo tandrefana rehetra raha ny andron'ny 9 mey kosa no hanatanterahana izany ho an'i Rosia sy Eoropa atsinanana sy afovoany. Noho ny fanaovana sonia indroa miantoana nataon'i Alemaina ho mariky ny fahareseny teo anoloan'ny tafika mpiara-dia etsy andaniny ary teo anoloan'ny tafika mena (sovietika) ankilany no anton'ny fahasamihafan'io fotoam-pankalazana io. Tsy io androm-pandresena teo amin'ny tafika miara-dia io velively ity andron'i Eoropa ity fa manamarika zavatra hafa hosoratako etsy ambany.
Araka ny antontan-kevitra ato, tamin'ny taona 1985 no nifidianan'ny Vaomiera Eoropeana tao Milan ny Fanambaran'i Shuman ny andron'ny 9 mey ho andron'i Eoropa. Tamin'ny 9 mey 1950 no nanaovan'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Frantsay, Robert Schuman, tao amin'ny Quai d'Orsay, Paris, ny tolo-kevitra hametrahana rafitra eoropeana lehibe hanara-maso sy hanambatra ny vokatra frantsay sy alemana eo amin'ny fitrandrahana arintany sy ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany. Miorina eo amin'ny fifandraisan'i Alemaina sy Frantsa hampiroboroboana ny toe-karena (Eoropeana) noho izany ity Andron'i Eoropa ity fa tsy tamin'ny fiafaran'ny ady teo amin'ny samy eoropeana nisian'ny resy sy ny mpandresy.
Amin'izao fotoana izao, efa tafajoro ny vondrona Eoropeana. Manana saina sy vola ary hiram-pirenena iraisana. Fanararaotra izao hanazavana amin'ny olona ny mombamomba ity Andron'i Eoropa ity. Saingy izao: Fony tonga teto ny governora jeneraly vaovao De Coppet tamin'ny 19 mey 1946, teo amin'ny Lapan'ny tanàna Antananarivo no fiarahabana eo amin'ny mpitondra sy ny entina, ka nisian'ny hiaka hoe "Vive de Coppet, Vive l'indépendance!". Teo dia efa karazany fanaovana fitakiana io toerana io, ary tsy adinoina fa teo ny voanjo no nitaky ny isamborana ny depiote MDRM tamin'ny 1947. Toeran-danonana io toerana io ary sarotra ny hanaisotra ny maha-toeram-pitakiana azy na dia ny tsy azy hanaovana intsony ho toeram-pitakiana aza no fanirian'ny mpifehy ny firenena amin'izao fotoana izao.
Jentilisa 8 mey 2012